कोरोनासँग लड्न के गर्दैछन् बागलुङका स्थानीय तह ? – Nepal Press
२०७८ वैशाख २५ गते ८:०५
आवश्यक भौतिकमात्रै नभई मानसिक रुपमा पनि तयार नभइसकेको अवस्थामा त्यसरी संक्रमित फेला पर्नु सबैका लागि चुनौतीको विषय बन्यो । बागलुङस्थित धौलागिरि अस्पतालमा आइसोलेसन वार्ड त बनाइएको थियो । तर, न स्वास्थ्यकर्मीमा अनुभव थियो न त अस्पतालसम्म कसले ल्याउँछ भन्ने स्वीकारोक्ति नै !
जिल्लाका स्थानीय तह ताराखोला गाउँपालिका, बडिगाड गाउँपालिका, तमानखोला, निसीखोला, बरेङ र बागलुङ नगरपालिका लगायतले आ-आफ्नै आइसोलेसन कक्ष बनाउन लागेका हुन् ।
प्रकाशित: २०७८ वैशाख २५ गते ८:०५